Ukuphupha kweMaulbeeren ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
AmaBlackberries zizityalo ezihlala ziluhlaza okanye imithi. Ikwangama-homonyms ohlobo lwezityalo, oko kukuthi usapho lwe-mulberry, olubandakanya umkhiwane, iavokhado kunye nomthi werabha.
Zininzi iintlobo ze-mulberry. Siziqhelanise ikakhulu neeblubheri ezimnyama nezimhlophe, kodwa umahluko obomvu uyakonwabela ukwanda kokuthandwa. Ngokwembonakalo, amaqunube amnyama ayafana namaqunube okanye amaqunube amnyama. Nangona kunjalo, ukumila kwayo kukude.
I-flavour ebomvu ebomvu kunye nomnyama yomelele kwaye imnandi. Ukwahluka okumhlophe, kwelinye icala, kunencasa enuka kamnandi. AmaBlackberries angasetyenziswa njengesithako kwizitya ezahlukeneyo. Ngenxa yezithako ezisempilweni, zinokusetyenziselwa nococeko.
1 Uphawu lwephupha «amaBlackberries» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «amaBlackberries» - Ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «amaBlackberries» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «amaBlackberries» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Ukubona komthi we-mulberry ephupheni kuzisa ngokungqinelana nohlalutyo ngokubanzi lwephupha lomphuphi. phu melela kunye nolonwabo kunye nawe. Unokulindela ukuba ube sempilweni entle. Umthi we-mulberry njengophawu lwamaphupha ukwathembisa ngamathemba amahle ngekamva. Ithemba lomntu oleleyo kunye nezicwangciso zakhe ziya kuzaliseka kungekudala.
Iziqhamo zemulberry njengephupha zibonisa ukuba umntu uya kufumana ubutyebi kwaye enye kwikamva elikufutshane. ubomi obutofotofo qhubelela kwi. Ukuchola amaqunube amnyama ephupheni kukwathembisa ukwanda kobutyebi.
Ukuba utya amaqunube omnyama ephupheni lakho, kunokwenzeka ukuba omnye umntu angene el mundo ukuvusa uyayithanda. Nangona kunjalo, isilumkiso siyacetyiswa, kuba iinjongo zalo mntu kufuneka ziqwalaselwe ngononophelo. Njengesithako esityeni okanye ekutyeni ephupheni, iblackberry inokuba yinto ekhethekileyo. amava uphawu lokuba umphuphi uya kujongana.
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, umbala wamaqunube amnyama ephupheni nawo kubalulekile. Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo kuyilo. AmaBlackberries njengomfanekiso wephupha onako Utshintsho Yehlabathi elivukayo. Ukuba amaqunube amnyama abomvu ephupheni, umntu ophuphayo uya kuyazi indlela yokusebenzisa amandla abo ngokuchanekileyo. I-Whiteberries, kwelinye icala, ibonisa ulwazi umntu lowo kuthethwa ngaye aza kuluzuza kungekudala.
Uphawu lwephupha «amaBlackberries» - Ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha kutolika uphawu lwephupha "amaqunube amnyama" njengophawu lwe amanxeba engqondo okanye amanxeba awaphetheyo umphuphi. Okokuqala, ukubona amajikijolo abomvu namnyama ephupheni kunokubonisa oku. Ke ngoko, iphupha elinje sisimemo sokunyanga la manxeba kunye nokuwalungisa.
Ukuba umthi we-mulberry uneentyatyambo ezininzi ephupheni, iziganeko ezimnandi ziyafumaneka kwabo baphupha ngobomi bokuvuka. Ukuzonwabisa ngaphambili. Nangona kunjalo, ukuba umthi ugawulwa ngezembe okanye uncothulwe xa ulele, kufanelekile ukuba kulindelwe ubunzima bosapho. Ingozi inokwenzeka.
Ukuthenga amaqunube amnyama ephupheni, umzekelo kwivenkile yentengiso okanye kwivenkile enkulu, kunokungahoywa kude kube ngoku iimfuno bonisa ukuba bakwachaphazela ubudlelwane babaphupha nosapho.
Uphawu lwephupha «amaBlackberries» - ukutolika kokomoya
Ngokusekwe kuphawu lwephupha "amajikijolo", ngokokuhlalutya okungaphaya kwephupha, amaqunube amnyama ephupheni angabhekisa Qonda komphuphi kwindawo yokomoya. Amaqunube amisiweyo ephupheni abonisa ukuba umntu oleleyo kusafuneka asebenze ngokwakhe kule ndawo. Amaqunube amnyama amatsha njengophawu lwephupha abonisa ukukhula okuqinisekileyo.